CSN oo raadraac ku haysa ardada lacagta lagu leeyahay | Somaliska
Hay’ada dowliga ah (CSN) ee bixisa lacaga deynta iyo deeqda isugu jira ee la siiyo ardada ayaa raadraac ku haysa arday badan oo lacag lagu leeyahay. Ardadaan ayaa la sheegay in laga dalbaday in ay soo celiyaan lacagihii ay qaateen ka dib markii aysan waxbarashadii si toos ah u tagin.
CSN ayaa bilowday bishii December in ay talefoon u dirto ardada lacagaha lagu leeyahay kuwaasoo laga dalbanayo in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo bixiyaan lacagta lagu leeyahay. Qaar badan oo ka tirsan ardada lacagta lagu leeyahay ayaa loo gudbiyay hay’ada aadka looga cabsado ee Kronofogden si ay lacagaha qasab uga soo qaado.
Sanadkii la soo dhaafay ayaa 18,000 oo arday waxaa lagu amray in ay bixiyaan lacago ay qaateen maadaama aysan iskuulka u xaadirin sidii laga doonayay. Ku dhawaad 4000 oo ka mid ah ardadaas ayaa loo gudbiyay Kronofogden maadama ay bixin waayeen lacagihii laga dalbaday.
CSN ayaa lagu dhaliilay in ay ardada si macno daro ah ugu gudbiso Kronofogden maadaama lacagaha lagu leeyahay ardada ay yihiin kuwo aad u yar oo inta badan aan ka badneyn 2000kr.
kuwaan in leska dhaafo ayaa fiican balaayo ha argtee sifud ayaad beerta ku adee
Avv Roble Cadde (Uganda) says:
dhamaan asxaabka samaliska.com waan idin salamay.
Salaan ka dib webkan wax badan ayaan aqrinaay waxyaabaha aan la yaabo ayaa ah in dadka ku xiran webka ee soomaaliyeed ay weydiiyaaan Jimcale iyo dadka la shaqeeyo Su’aalo kamana soo jawaabaan.
Marka waxaan is weydiiyay why ay uga jawaabi waysan yihiin su’aalaha waayo jawaabtu ma ahan uun in ay noqoto waan ogahay ama waan aqaan oo waxey ku jawaabi karaan Informationka aad na soo weydiisay ma hayno.
Fadlan cidii og sababta ku qasabtay asxaabta webka in ay dhageystaan dadka ha ii sheegto?!!!!!!!
asc lacagta ardayda qateen oo aad ledahay kronfogden ayaa loo gudbinayaa waa kuwee kuwa qatay lacagta guridhigashada ah miyaa ama ku ardayda ah oo dhigta dugsiga sare ? isoo kalacadey
@Hassan…, bro lacagta laga hadlayo waa mida waxbarashada lagu qaatey ee skuulkana la tagin ama si fiican loo dhiganin
Laakiin mida kale ee guri dhigashada waxaa ku qoran marka aad saxiixeyso in lagaa rabo soo celiskeeda 24 bil kadib ( hadaad rabto waad ka soo hormarin kartaaa)
asc waxan su aal way diinayaa sxbkay jimcaale waxan doonayaa mowduucaan meesha aad ku soo qortay ee ah csnta waxan filayaa dadbadan in ay qaateen lacagtaas marka wax miyey udhimi kartaa qofku haduu doonayo dhalashada wadan ka in uu qaato dayntaas lagu leeyahy ee csnta mahadsanid
L L Cool J says:
January 7, 2013 at 21:09
dabcan qaadashada dhalasha waddan wax way u dhimi kartaa, maadaama lacag lagugu leeyahay, welibana aad ku jirto Kronofogden, so be carefull dude 😉
war wesedkan malmahan waa kasii dhamanoysaaa tala mahayan been iyo wax aan soconayanin ayee wadaan